माओवादी केन्द्रीय कार्यालय ध्वस्त बनाइदिउँ : पूर्व प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»माओवादी केन्द्रीय कार्यालय ध्वस्त बनाइदिउँ : पूर्व प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल
By रिता घिसिंग on ३० पुष २०७४, आईतवार ०४:२७ समाचार
काठमाडौँ : माओवादीले प्रचण्डको उपस्थितिमा काठमाडौंमा पहिलो आमसभा गर्दै थियो । त्यो पनि सैनिक मञ्चमा । आफ्ना कार्यकर्तालाई सैनिक मञ्चमा परेड खेलाउने र देशभरिबाट मान्छे ओसारेर टुँडिखेल ढाक्ने तयारी रहेछ ।
प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आमसभाको स्वीकृति दिनुभएछ । प्रधानमन्त्रीको लालमोहरकै भरमा सेनालाई यस्तो निर्णय मान्य हुने कुरा भएन । माओवादीले सेनाको छातीमा बजारेको कुन सिपाहिलाई असह्य हुन्थ्यो र ?
शान्ति सम्झौतापछि पनि राष्ट्रिय सेनाप्रति माओवादीको शत्रुतापूर्ण ब्यबहार कायमै थियो । सैनिक मञ्चमा परेड खेलेर जितको सन्देश दिन माओवादी नियत मैले बुझेको थिएँ । यसमा सेनाको मनोबल घटाउँने अभिष्ट लुकेको थियो ।
हेडक्वार्टरबाट बालुवाटार जान पन्ध्र मिनेट लाग्थ्यो । मैले त्यति धैर्य गर्न सकिनँ । फोनमै आफ्नो अडान प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइदिएँ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू, दिल्लीको लाल किल्लाभित्र कुनै पार्टीले आमसभा गरेको थाहा पाउनुभएको छ ?’ मैले भने ।
‘मैले चिपसापको कुरा बुझिनँ, उहाँले मसिनो स्वरमा भन्नुभयो । टुँडिखेलमा राष्ट्रिय कार्यक्रमबाहेक कहिल्यै कुनै दल बिशेषको आमसभा भएको छ ?’ म झोक्किएँ ।
उहाँले बुझिहाल्नु भयो ।
‘शान्ति प्रक्रियामा आएकालाई किन चिढ्याउनु भनेर हुन्छ भन्दिएको हुँ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
‘सेनाले राज्यका समारोहबाहेक दलको झन्डा बोक्ने कसैलाई सैनिक मञ्चमा पाइला टेक्न दिँदैन’, मैले आफ्नो निर्णय सुनाइदिएँ ।
‘शान्ति र संबिधानको कुरा छ । राष्ट्रिय सेनाले कसैप्रति प्रतिशोध राख्नु हुँदैन’, उहाँले मनाउन खोज्नुभयो, सेना अलि सफ्ट भइदिनुपर्छ ।’
‘सैनिक मञ्चमा बुट बजार्ने माओवादीको सपना मेरो लाशमाथि टेकेर मात्र सम्भब छ ।’
‘ल त ल, आर्मीको नियमअनुसार गर्नुस्’, गिरिजाबाबुले फोन राखिदिनुभयो ।
मैले प्रधानमन्त्रीको संबाद उच्च सैनिक अधिकारीहरूलाई सुनाएँ । भनेँ, ‘माओवादीले थाहा पाउन्, यो संबाद लिक गरिदिनु ।’
म र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीचको कुराकानीले सबैतिर चर्चा पायो । माओवादीले आफ्नो तयारी रोकेनन् । पम्प्लेट टाँसे । दरबार ढलेको चित्र बनाए । सैनिक मञ्चमा पसेर राजपरिवार बस्ने आसन ध्वस्त पार्ने हल्ला चलाए ।
‘लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि सैनिक मञ्चमा कार्यक्रम गर्ने नपाउने ? उनीहरूका केही नेता हामीबिरुद्ध खनिन थाले, ‘राजाको सेनाले जनतालाई टुँडिखेलमा निषेध गर्न पाउँदैन ।’
म भने आफ्नो निश्चयमा दृढ थिएँ ।
शशिभबनको जमघटमा सञ्चारकर्मी, वकिल, नेता मानबअधिकारवादीलाई सेनाको पोजिसन प्रस्ट पारेँ,’ सैनिक मञ्चको सुरक्षाका लागि कठोर कदम चाल्न तयार छु ।’
माओवादीले लाखौँ जनताका साथ टुँडिखेल छिर्ने धम्की दिइरहेको थियो । पोस्टरिंग, पम्पलेटिंग, माइकिंग गरेर प्रोपोगान्डा मच्चाइरहेको थियो ।
माओवादी दूत बनेर अनुमति माग्न आउनेहरूलाई मेरो जवाफ हु्न्थ्यो’, सैनिक मञ्च हाम्रो छाती हो । त्यहाँ पाइला टेक्नेलाई म आफैँ सिपाहीको अग्रपंक्तिमा बसेर मेसिन गगनले भुटिदिन्छु ।’
माओवादी सभा हुनु केही दिनअघिदेखि नै सैनिक मञ्च वरिपरी फौज तैनाथ भयो । हामीले अघिल्लो दिन राति नै हातहतियारसहित सैनिक मञ्च घेर्यौँ । महांकालको पुरानो अस्पताल र मन्दिरको छतमा सिभिल पोसाकमा सेना खटायौ । सञ्चार सेट र सिसिटिभी जताततै जडान गर्यौ । केही भइहाले मानवअधिकारवादीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मलाई देखाउन क्यामरा जडान जरुरी थियो ।
अन्ततः माओवादी पछि हट्यो । उनीहरूले सैनिक मञ्च टुँडिखेलको सट्टा खुल्लामञ्चमा आमसभा गरेर चित्त बुझाए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पछि कुनै कार्यक्रममा खुल्लामञ्चबाट सैनिक मञ्चतिर धारे हात लाउँदै भन्नुभएको थियो, ‘को हो त्यो कटवाल भनेको ?’
जे होस् रक्तपात टर्यो ।
फेरि अर्को घटना त्यस्तै भयो ।
रामेछापका एकजना लप्टन २०६४ चैतमा घर गएका रहेछन् । त्यही बेला माओवादीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएछ ।
मैले तुरुन्त रक्षामन्त्रालय समेत हेर्ने प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेँ, ‘माओवादीले हाम्रो अफिसर कब्जामा लिएका छन् । तुरुन्त छाड्न भन्दिनुपर्यो ।’
गिरिजाबाबु माओवादीप्रति धेरै ‘सफ्ट’ हुनुहुन्थो । उहाँ विषयान्तर गर्न खोज्नुहुन्थ्यो । म भने टसमस भइनँ ।
माओवादीले सेनाको अफिसर नियन्त्रण गरेको घटना निकै गम्भीर हो,’ मैले प्रधानमन्त्रीलाई मुखै फोरेर भनेँ, ‘हाम्रो मानिस तुरुन्त छोड्नु, नत्र म माओवादी हेडक्वार्टर ध्वस्त पार्दिन्छु ।’
त्यतिबेला माओवादी मुख्यालय बुद्दनगरमा थियो । मुख्यालय हान्न सिंहदरबारमा रेन्जरसहित एक टुकडी फौज जम्मा गरेँ । माओवादी कब्जामा रहेका अफिसरलाई छुटाउन पूर्वको सम्बन्धित बाहिनीलाई ‘रेस्क्यु’ अपरेसन थाल्न निर्देशन दिएँ ।
केही बेरमै यो खबर संसारभर पुगे छ । राष्ट्रसंघ, दिल्ली जताततैबाट फोन आउन थाल्यो । मध्यस्थ गर्न खोज्नेलाई मैले भनिदिएँ, ‘म ज्युँदो हुँदाहुँदै सेनाको कुनै सिपाहिलाई कसैले कोतर्न पनि पाउँदैन, खुरुक्क हाम्रो लप्टन छाड्छन् कि माओवादी केन्द्रीय कार्यालय ध्वस्त बनाइदिउँ ।’ माओवादी डराए छन् ।
केही बेरमै हाम्रो लप्टन सकुशल छाडिएको खबर आयो । मैले फौज फिर्ता गरे । अर्को रक्तपात टर्यो ।
(नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको आत्मकथाबाट लिईएको छोटो अंश )
स्रोत : बिगुल न्युज
९ माघ २०७४, मंगलवार ०६:३२ 0
पातले छाँगो (डेभिज फल्स) को अदभुत दृष्य हेर्नुहोस् भिडियोमा